Mushahar ku hel si aad dadka ula socoto Instagram-ka sanadka 2021 | Samee In ka badan $ 100/Bishii
Bogga ugu weyn Mushahar ku hel si aad dadka ula socoto Instagram-ka sanadka 2021 | Samee In ka badan $ 100/Bishii
Instagram waa xoog dabiici ah. Waxa kaliya ee ahaa barnaamij wadaagga sawir-qaadista ayaa markii hore noqday mid ka mid ah aaladaha ugu sarreeya warbaahinta bulshada in ka yar toddobo sano. Waxay u noqotay dadka qaar Dad badan ayaa beddelay maxaa yeelay iyaga ayaa u ah meel lacag lagu siiyo si loogu raaco dadka barta Instagram -ka.
Waxay si dhakhso leh u labanlaabtay saldhiggeeda isticmaale labadii sano ee la soo dhaafay ilaa 700 milyan oo isticmaale. Koritaankiisu wuu qarxay tan iyo markii la bilaabay Sheekooyinka Instagram bishii Ogosto 2016.
Kaliya waxay u socotaa inay muujiso sida wanaagsan ee dadku uga jawaabaan nuxurka fudud, ee muuqaalku kaxeeyo. Xiisaha Instagram ayaa si weyn u koray lixdii sano ee la soo dhaafay.
Oo waxaan aad uga shakisanahay inay si dhaqso ah hoos ugu dhigi doonto. Si kasta oo aad u jeexdo, dadku waxay jecel yihiin Instagram. Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ee loo wadaago sawirrada iyo sidoo kale lacag lagu siiyo dadka soo socda intarneedka.
Maqaalkani wuxuu sharxayaa sida lacag loo helo si loogu raaco dadka Instagram, sida ay u shaqeyso, iyo wax kasta oo kale oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Istaraatiijiyadaha Sameynta Lacagta ee Instagram -ka
#1 - Gaaritaan iyo Saameyn
#2 - Kuwa raacsan ee ku hawlan
Sida Lacag Loogu Helo Si Aad Dadka Uga Raacdo Instagram
#1 - Abuuritaanka Xisaab Saameyn leh
#2 - Saameeyayaasha
Waa kuwan qaar ka mid ah moodooyinka ganacsiga ee sida lacag looga sameeyo barta Instagram:
#1 - Noqo saamile oo lacag ka samee jagooyinka la kafaalo qaaday.
#2 - Dooro niche
#3 - Iskaashi la leh sumadaha
#4 - Noqo mid ku xidhan oo lacag ka samee iibinta alaabta dadka kale.
#5 - Iibi alaabtaada jirka. …
#6 - Abuur Muuqaalo Muuqaal Iib ah
Qalabkani wuxuu ka qaadaa dhejimaha Instagram quudintaada, wuxuuna u beddelaa degel si buuxda looga dukaameysto 3 tallaabo oo fudud:
Noqo Danjire Brand.
Hal shay oo ku saabsan suuqgeeyayaasha ayaa ah inay ka go'an tahay inay u adeegaan dhagaystayaasha. Markaad u abuureyso khibrad weyn rajooyinkaaga, markaa lacagtu waa wax soo saar.
Waxaad fahansan tahay in la dhiso wax soo socda ka dibna la wado xayeysiis si loo iibiyo badeecadaada waa hab wanaagsan oo dakhli lagu abuuro. Sug daqiiqad in kastoo…
Miyaadan taas hore u ogayn? Waa istaraatiijiyada ugu cad ee lacag lagu sameeyo internetka.
Markaa aan wada hadalka sii fidinno oo aan dhaafsiisan talooyinka noocaas ah. Aynu dhex galno waxyaalaha qaro weyn oo aan aragno sida dhab ahaan lacag loo siiyo iyadoo la raacayo dadka oo laga dhigayo $ 200 illaa $ 10,000 (xitaa in ka badan) bishiiba madal bulsheedka muuqaalka ah.
Gaadh oo saamayn ku yeela
Maxay ganacsiyadu lacag ugu siiyaan isticmaale Instagram -ka adiga oo kale ah?
Waxay la kulmaan dhagaystayaashaada, waxayna rajaynayaan inay lacag ku kasbadaan geedi socodka iyagoo raacayaashaadu iibsadaan ama ku taliyaan alaabadooda.
Instagram waa deeqsi leh u dirista boostadaada quudin badan oo taageerayaashaada ah. Haddii aad soo dhejiso waqtiga ku habboon oo aad isticmaasho hashtags (gadaal ayaan ka wada hadli doonnaa xeeladahaan), markaa gaarsiintaada organic ayaa ka sarreysa marka la barbar dhigo aaladaha kale ee warbaahinta bulshada.
Hubaal, raacayaal badan ayaa kor u qaadi doona hankaaga. Xitaa xisaab ahaan, waxay kordhineysaa itimaalkaaga inaad ka dhex muuqato quudin badan oo Instagram ah.
Haddii aad haysato 1,000 raacsan oo ku hawlan, suurtagalnimada inaad lacag samayso ayaa jirta. Suuqyadu waxay diyaar u yihiin inay maalgashi kugu sameeyaan sababta oo ah ficillada faa'idada leh ee aad ku waddo koontadaada.
Kaliya raacitaanka dadka, ma kasban doontid dinaar. Taasi waa hubaal.
Waa dhanka kale, waxaad u baahan tahay inaad iyaga hesho si ay kuula socdaan! Waa kuwan siyaabo aad lacag ugu heli karto raacitaanka barta Instagram:
Abuuritaanka koonto saamayn leh
Laakiin, haddii aad samayn karto koonto Instagram saamayn leh, markaa waxaad ku bixin kartaa “Qaylo-dhaan” qiimo.
Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan uguna caansan ee xoogaa lacag dhab ah looga sameeyo Instagram.
Xitaa haddii aad dhisi karto koonto “Niche Instagram” (Aynu nidhaahno niche Beauty) markaa waxaad samayn kartaa xayeysiisyo wax -soo -saar leh. (Xayeysiisyada ku saleysan niche) oo hel guddiga iibka.
Xaqiiqdii, haddii aad tahay qof hal abuur leh oo ku filan, waxaad lacag ku heli kartaa barta Instagram.
Tani waxay ku lug leedahay baaritaanka Instagram -ka iyo helida boggag ku jira niche -kaaga oo leh soo -dhoweyn aad u weyn iyo hawlgallo badan. Sida ay qaylo -dhaantu u shaqeyso ayaa ah, waxaad siisaa lacag si ay boostada/dalabkaaga u geliyaan boggooda Instagram. Waxaad kaloo haysataa ikhtiyaar inaad ku isticmaasho iskuxirkaaga taariikh nololeedkooda muddo cayiman. Xidhiidhku wuxuu noqon karaa bogga cadaadiska, badeecadda eCommerce, ama dalab ku xiran.
Sida iska cad, waxaa jira wax badan oo intaas ka badan,
Qoraallada la kafaalo qaaday waxay noqon karaan waxa ugu horreeya ee maskaxdaada ku soo dhaca markaad maqasho weedha 'saamayn ku yeelashada Instagram.' Waxaa jira in ka badan 500,000 oo saamayn firfircoon ku leh barta Instagram-ka horaantii 2019. Shuruudda aasaasiga ah ee halkan ayaa ah tirinta raacayaasha si hufan oo cajiib ah iyo heerka ka-qaybgalka tartanka. Si kale haddii loo dhigo, istaraatiijiyadani adiga ayay kuu tahay haddii aad ku fiican tahay samaynta dadka aan internetka ahayn ee ku jecel oo ku aamin.
#2 - Xullo xulo
Haddii aad runtii rabto inaad lacag ku hesho barta Instagram, waxaad ku noolaan doontaa oo neefsan doontaa astaantaada shaqsiyeed. Hubi inaad si dhab ah u jeceshahay.
Oo tixgeli sida lammaanahaaga suurtagalka ahi ay wax u arkaan. Calaamadaha ayaa isbarbar dhigi doona dhagaystayaashaada suuqa bartilmaameedkooda. Sida laga soo xigtay daraasad dhowaan la sameeyay, 55% sumadaha ayaa sheegaya inay doorbidaan kuwa wax-ku-oolka ah, kuwaas oo ay u arkaan inay xiriir dhab ah la leeyihiin dhagaystayaashooda.
Waxaa jira laba waddo oo waaweyn oo lala xiriiriyo lamaanayaasha sumadda:
Soo hel iyaga oo toos toos ugu dhejinaya. La xiriir summadaha aad naftaada ku majeerto oo u sheeg waxaad bixin karto. Goobta astaantaadu waxay u baahan tahay inay bixiso faahfaahin badan oo ku kalifaysa dhagaystayaashaada iyo habka aad u socoto.
Ka caawi iyaga inay ku helaan adiga oo iska diiwaangeliya madal suuqgeyn saamayn leh. Waxaa jira. badan oo ka mid ah suuqyadan. AspireIQ, Upfluence, iyo Famebit waa meelo fiican oo laga bilaabo.
Si ka duwan nuxurka la kafaalo qaaday, istaraatiijiyadan ayaa ka yar faafinta wacyiga iyo wax badan oo ku saabsan samaynta iibka. Tani waa sababta oo ah waxaad lacag uun samaysaa marka kuwa raacsan ay si dhab ah u iibsadaan sheyga. Dhinaca wanaagsan, adiga oo ah suuqle ku xiran, uma baahnid inaad ka welwesho soo saarista badeecadaas ama fulinta amarrada.
Hoos u dhaca ayaa ah in istiraatiijiyadani u baahan tahay istiraatiijiyad adag haddii aad rabto inaad korto adigoon ka xanaajineyn dhagaystayaashaada.
Istaraatiijiyadda saddexaad ee lacag-ka-sameynta Instagram-ka ayaa dhaafsiisan suuq-geynta oo u gudubta dhanka ganacsiga e-commerce ee dhabta ah.
Halkii aad u adeegsan lahayd sumaddaada shaqsiyeed si aad u iibiso alaabta dadka kale, iska iibso oo lacag bixi.
Wax qarsoodi ah maahan in Instagram ay tahay goob muuqaal ah: Dadku waxay maalin walba soo geliyaan 100 milyan+ sawirro & fiidyowyo. Si kastaba ha ahaatee, kuma filna in magacyadu ay soo geliyaan sawirro xirfadeed oo aad loo qurxiyay alaabtooda si ay uga soo baxaan dadka badan.
Macaamiisha casriga ahi waxay jecel yihiin runnimada, sidaa darteed waxay fiiro gaar ah u yeeshaan waxyaabaha ay isticmaaleyaashu soo saareen.
Xaqiiqdii, macaamiisha badankood waxay rumeysan yihiin in UGC ay 35% ka xusuus badan tahay warbaahinta kale, sidaa darteed meheradaha cabbirkoodu dhan yahay waxay rabaan inay daabacaan waxyaabaha ay macaamiishooda abuureen. Si fudud haddii loo dhigo, waa fursaddaadii aad ku iibin lahayd sawirro iyo fiidyowyo aad abuurtay.
Sida Google iyo Facebook oo kale, Instagram waa meel ay macmiisha iman kara maalin kasta joogaan.
Haddii aad rabto inaad barato sida lacag looga sameeyo Instagram, waxaad u baahan tahay qaab ganacsi oo habboon.
Hal qalab oo cusub oo aad u adeegsan karto inaad ka iibiso badeecadaha Instagram waa Square Online.
Ku xiro koontadaada Instagram Square.
Ku calaamadee waxyaabaha ku jira dhejimahaaga Instagram ee aad rabto inaad iibiso.
Guji "Daabac" oo bilow boggaaga internetka.
Maaddaama ay adag tahay in badeecadaha laga iibsado khadka tooska ah ee Instagram oo keliya, waa fikrad fiican in sidoo kale la yeesho degel. Iyo aaladdan cusub ee Square Online ayaa tan ka dhigaysa mid aad u fudud.
Waxaad ku bilaabi kartaa Square Online lacag la’aan oo kaliya waxaad bixin kartaa khidmadaha macaamilka. Markaa waad u cusboonaysiin kartaa qorshe lacag bixin ah markaad diyaar u tahay inaad dhisto degel leh domainkaaga gaarka ah.
Haddii aad tahay qof bilow ah, waxaad sidoo kale bilaabi kartaa meherad daad -gurasho ah markaa uma baahnid inaad soo rarto badeecadahaaga ama maareyso soo -celinta.
Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad barato sida wax looga iibiyo Amazon oo kor loogu qaado badeecadahaaga Instagram -ka habkaas. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad ku darto xiriirinta waxyaabaha ku jira koontadaada Instagram.
Kaliya qor wicitaan ficil oo ku dar isku xirka websaydhka si kuwa xiisaha lihi wax badan uga ogaadaan dalabkaaga.
Oo haddii aad u wareegtay koonto abuuraha Instagram, waxaad abuuri kartaa qoraallo dukaamaysan si aad ugu iibiso gudaha-app alaabada jireed.
Wax kastoo aad iibiso, macmiilkaaga suuro galka ah ayaa laga yaabaa inuu halkaas joogo. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah inaad hesho niche -kaaga oo fiiriso tartanka adoo raadinaya hashtags iyo ereyo -fure aad rabto inaad bartilmaameedsato. Sidaas ayaad sidoo kale lacag ku helaysaa.
Qoraallada la kafaala qaaday waxay si fiican ugu shaqeeyaan Instagram, laakiin shirkadaha badankood waxay rabaan inay xiriir waqti-dheer ah la yeeshaan saamileyaasha, sidaa darteed waxay raadiyaan danjirayaal sumcad leh oo si joogto ah kor ugu qaadi kara shirkad si wanaagsan.
Maaddaama Instagram ay tahay kanaalka loogu doorbida badan yahay suuqgeynta saamaynta, waa meel ku habboon dadka isticmaala inay ka helaan barnaamijyo safiir summad leh oo ay iskaashi la sameeyaan shirkadaha si kor loogu qaado badeecadooda. Summadaha waaweyni sidoo kale waxay had iyo jeer u soo diraan badeecado lacag la'aan ah saamaynta si ay dib ugu eegaan oo kor ugu qaadaan.
Maxaad ka baratay qoraalkan?
Miyaad u malaynaysaa in mid uun lacag lagu siin karo iyadoo la raaco dadka onlaynka ah?
Hoos kaga tag faallo haddii aad jeceshahay qoraalkan.
10 Siyaabood oo lacag looga helo barta Instagram 2021 | Tabaha la caddeeyay
10 Xeelado Cusub si aad Instagram -ka ugu hesho 10,000 oo Ruux 2021 -ka
17 Siyaabood oo Aan La Qaban Karin Oo Lacag Laga Helo Baraha Bulshada 2021 -ka
Sida Lacag Loogu Sameeyo Baraha Bulshada Si Degdeg Ah 2021
Makhaayadaha Meesha Carruurtu Cunto Bilaash ku Cunto 2021 -ka
Barnaamijyada Horumarinta Lacagta sida Dave: Dib -u -eegid Buuxda ee 2021
22 Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee loogu talagalay taleefankaaga casriga ah ama Aaladda Moobaylka sannadka 2022 -ka
Ma u baahan tahay lacag yar oo dheeraad ah? Maqaalkan, waxaan ku wadaagnaa barnaamijyada lacag -samaynta ugu fiican ee…
Erayada waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh marka sawiro lala socdo. Inta badan maqaallada, macluumaadka macluumaadka iyo qoraallada xarfaha ayaa aad u soo jiidanaya marka ay…
Intee in le'eg ayaan ka heli karaa Tijaabiyaha Isticmaalaha Mise Waa Fadeexad? Faallooyinka UserTesting
Waa suurtogal! Dib-u-eegista barnaamijka UserTesting wuxuu muujinayaa inaad samayn karto inta u dhaxaysa $ 3- $ 60 kaliya inaad haysato…
Maxaad iga fikiri doontaa haddii aan kuu sheego inaad dhab ahaan lacag ku heli karto…
Daqiiqad 23 akhri
Caadi ahaan waxaad ku dheggan tahay aaladahaaga, laakiin ma dareentay in taleefankaaga casriga ah ama laptop-kaagu uu ku kasban karo…